I-MOS-P4: Ukuhlola iMicrosoft Open Source enkulu futhi ekhulayo - Ingxenye 4 | Kusuka kuLinux
Ngalokhu ingxenye yesine kusukela ochungechungeni lwezihloko ezikwi- «IMicrosoft Umthombo Ovulekile » Siyaqhubeka nokuhlola kwethu ikhathalogi enkulu futhi ekhulayo ye vula izinhlelo zokusebenza ithuthukiswe yi Ezobuchwepheshe Giant de «I-Microsoft ».
1 I-MOS-P4: Umthombo Ovulekile weMicrosoft - Ingxenye 4
1.1.2 I-UI eshelelayo
1.1.3 Uhlaka Lukaketshezi
I-MOS-P4: Umthombo Ovulekile weMicrosoft - Ingxenye 4
"Iqoqo lobuchwepheshe obususelwa kuma-Web Components kanye namazinga wewebhu anamuhla, aklanyelwe ukukusiza ukuhlangabezana ngempumelelo nezinye zezinselelo ezivame kakhulu kuwebhusayithi nasekuklanyweni kwezinhlelo nasekuthuthukisweni kwezinhlelo."
"Ubuchwepheshe be-FAST bungasetshenziswa ekufuneni noma njengesiqephu sokwakha amawebhusayithi asezingeni lamabhizinisi, izinhlelo zokusebenza, izingxenye, izinhlelo zokwakha, nokunye okuningi."
Note: Imininingwane engaphezulu enemininingwane futhi ewusizo ingatholakala ngqo kokulandelayo isixhumanisi: fast.
"Iqoqo lezinhlaka ze-Fluent Design UX zokwakha izinhlelo ezinhle, ezinamapulatifomu abelana ngekhodi, ukuklama, kanye nokuziphatha kokusebenzisana."
"I-UI eshelelayo yenza abaningi bakwazi ukudala izinhlelo zabo basebenzisa izinto ezifanayo zomthombo ovulekile njengathi (iMicrosoft), kufaka phakathi ukufinyeleleka, ukwenziwa kwamazwe omhlaba nokusebenza."
"Iqoqo lemitapo yolwazi yamakhasimende ukusabalalisa nokuvumelanisa izwe okwabelwana ngalo."
"Le mitapo yolwazi ivumela amaklayenti amaningi ukuthi ngasikhathi sinye enze futhi asebenze kuzakhiwo zedatha ezabiwe kusetshenziswa amaphethini wokufaka ikhodi afana nalawo asetshenziswa ukusebenza ngemininingwane yendawo."
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" kulokhu kuhlola kwesine kwe «Microsoft Open Source», inikeza izinhlobonhlobo zezicelo ezivulekile nezinhlobonhlobo ezivulekile ezakhiwe yi-Technological Giant ye «Microsoft»; futhi inentshisekelo nokusetshenziswa okukhulu, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-MOS-P4: Ukuhlola iMicrosoft Open Source enkulu futhi ekhulayo - Ingxenye 4